AKHRISO: RW Kheyre muxuu ka hor sheegay Madaxda Caalamka ee kushiran NEW YORK? – Puntlandtimes
AKHRISO: RW Kheyre muxuu ka hor sheegay Madaxda Caalamka ee kushiran NEW YORK?
NEW YORK(P-TIMES)- Ra’iisulwasaaraha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa khudbad sannadeedka Soomaaliya ku leedahay Qaramada Midowbay ka jeediyey magaalada NEW YORK, iyadoo ay fadhiyeen Madaxda dalalka Aduunka.
Raysalwasaaraha Soomaaliya wuxuu diiradda saaray arrimaha Amniga, Dhaqaalaha iyo sidii dibu dhis loogu sameyn lahaa Jamhuuriyada Faderaaliga ah ee Soomaaliya.
Mr, Kheyre ayaa u mahad-celiyey wadamada Dhaqaalaha iyo ciidamadooda ku huray sidii nabad looga heli lahaa Soomaaliya, kuwaas oo uu sheegay in ay qaateen go`aan wanaagsan oo dhabaha u xaari kara nabad wanaagsan.
“Ii ogolaada inaan marka hore u hambalyeeyo madaxweynaha 72 golaha guud ee Qaramada Midoobay oo doorkaan qaatay, oo nagu casuumay kulankaan muhiimaddiisa tahay guul, sanadkaan kulanka ayaa kusoo aaday baalinta nabadda caalamiga ah.”
“Shalay waxaan u fiirsanahay ama daraaseynay maalinta nabadda adduunka, maalin loogu yeeray wadajir iyo midnimo, oo aan u midoobeyno kuwa lagu qasbay inay ka qaxaan guryahooda iyo kuwa guryahooda uga cararay inay helaan nolol wanaagsan” ayuu yiri Xasan Cali Kheyre.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka hadlay dhibaatada heysata Muslimiinta Ruhinga, isaga oo sheegay in loo baahan yahay in albaabada caalamka loo furo, lagana shaqeeyo midnimada caalamka.
“Mowduuca sanadkaan ee golaha guud ayaa ah ka hadalka nabadda iyo nolol wanaagsan oo loo marayo qorshe degen,iyadoo sidoo kale diirada lagu saarayo raadinta nabadda, nolol wanaagsan, xushmad, badbaado iyo sharaf oo malaayiin caalamka ku nool ay u baahan yihiin maanta;”
“Kuwaasi oo ka yimid Syria,Jamhuuriyadda afrikada Dhexe, dadka Ruhinga ee Myanmar, dadka Libya, tirada colaadaha daba dheeraaday iyo khilaafyada cusub waa mid aan la aqbali karin”
“Shacabka Soomaaliyeed waxay sanado badan dhibane u ahaayeen dagaalo, abaar iyo faqrinimo, kuwaasi oo qasbay inay gudaha ku barakacaan , halka kuwo kale ay safar usoo galeen dibadda. sidaasi daraadeed waxaan ognahay baahida loo qabo dadka nala mid ah in albaabada loo furo kuwaasi oo doonayo inay nolol amaan iyo sharaf ah ku noolaadaan”.
Khudbada Xasan Cali Kheyre oo dhinacyo badan taabaneyso ayaa ugu dambeyn wuxuu sheegay in Soomaaliya ay hadda ka baan yihiin fursado badan oo caalamka uu maalgashi ku sameyn karo.